Nagarik News - निर्लज्ज! मतिहीन!
पोखरा फूलबारीकी ममता अधिकारीलाई हरेक वर्ष तीज कहिले आउलाझैँ लाग्छ। दिदीबहिनी जम्मा भएर नाचगान गर्ने अवसर छोप्न उनी सधैँ उत्साहित हुन्छिन्। ममता तीजगीतकी पारखी पनि हुन्। टेलिभिजनमा बज्ने तीजगीत हेर्दै उनी रमाउँछिन्। तर, आजभोलिका तीजगीत सुन्दा उनलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। 'सुन्न र हेर्नै अप्ठ्यारा हुने किसिमका तीजका गीत बन्न थालेका छन् आजभोलि,' ममता भन्छिन्, 'परिवारसहित तीजका गीत हेर्ने लाज लाग्न थाल्यो अब त।'
तीजका हिट गीत भन्दै टेलिभिजनमा आजभोलि एकपछि अर्को गर्दै गतिछाडा गीत बजाइन्छन्। युट्युबमा सर्च गर्दा पनि त्यस्तै किसिमका उत्ताउला तीजे गीत भेटिन्छन्। तीजका नाममा उरन्ठेउला गीतको बाढी नै आएको छ।
लाली बैँस छोपेन जामाले
नक्कली भई नभन आमाले
यो तीजमा रातो सारीलाई
मेरो त पिठ्यूँमा बेस्सरी चिलायो
बैँस पो चढ्यो कि जुम्रा पो पर्‍यो कि
ए होई कन्याइदेऊ न बाई
विकृत हुँदै गएका तीजे गीतहरूको प्रतिनिधि गीत हो यो।
पहिला तीजमा महिलाहरू पार्टी पौवा, चौबाटो, स्कुललगायत ठाउँमा जम्मा भई मादल बजाउँदै नाच्थे। वर्षभरि काममा व्यस्त हुने महिला एक दिन तीजमा माइत गएर दुःख बिर्सने गर्थे। उनीहरूले आफ्नो दुःख र पीडालाई पोख्न वेदनायुक्त गीत गाउँथे। बिस्तारै गीत रेकर्ड गर्ने चलन आयो। उनीहरू क्यासेटका गीत बजाउँदै नाच्न थाले। त्यही गीतको स्वरमा स्वर मिलाउँथे।
लोकगायिका एवम् प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालाले पनि तीजका थुपै्र गीत गाइन्। 'उहिले तीजे गीतमार्फत महिलाले वर्षभरिका पीडा पोख्थे। अहिले त्यस्तो चलन हराइसक्योे,' कोइराला भन्छिन्, 'आजभोलि तीजे गीत हेर्न र सुन्न लाज लाग्ने खालका छन्।'
कोइरालासँग सहमत छिन्, गायिका सीता बराल। 'मायाप्रेमका शब्द गाउँदैमा तीजे गीत हुँदैनन्,' उनी भन्छिन्, 'समाजलाई पच्ने र सही बाटो देखाउने खालका गीत पो हुनुपर्छ।'
'माइत जान नपाउनुको पीडा, भाइ नहुनुको पिर, माइती टाढा हुनुका कष्ट गीतमा आउँदैनन् आजभोलि,' बराल थप्छिन्, 'अहिलेका तीजे गीतमा कि 'पोइ' खोजिदिन शिवलाई घुर्की लाउँछन् कि त बैँसले उन्मत्त युवतीहरू गीतमा छिल्लिएका हुन्छन्।' तिनै उत्ताउला तीज गीतमा घिउ थप्ने काम पुरुष गायकले गरिरहेको पनि बराल बताउँछिन्।
संगीतकार एवम् रचनाकार राजकुमार बगर म्युजिक कम्पनी, कलाकारहरू बढी व्यावसायिक भएकाले पछिल्लो समय तीजको नाममा उरन्ठेउला र समाजलाई पचाउन मुश्किल पर्ने गीत धमाधम बजारमा आइरहेको बताउँछन्। 'तीज महिलाहरूको चाड हो। तीजमा नाच्ने, गाउने, रमाउने पनि महिला नै हुन्,' उनी भन्छन्, 'महिलाले गाउँदा ठीक हुन्थ्यो। पुरुषले गाउन थालेपछि विकृत गीत आउन थालेका हुन्।'
तीजे गीतमा पुरुषले गाउने चलन ल्याउने पोखराका गायक प्रजापति पराजुली हुन्। उनले २०५८ सालमा तीजे गीतको एल्बम 'वेदनाको पोको' निकालेपछि त्यो एल्बम भाग–७ सम्म निस्किएको थियो। त्यसपछि तीजे गीत पुरुषले गाउने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । तीजे गीत गाउने परम्परा बसाल्ने प्रजापति अहिले बजारमा आएका एकाधबाहेक सबै गीत तीजे नभई रत्यौली भएको बताउँछन्। 'तीजे गीतमा पुरुषले गाउने चलन ल्याउने प्रजापति हो भनेर अपजश मलाई आउँछ। तर, मैले रत्यौली गाएको छैन। मेरा तीजे गीतमा केटा नाचेका छैनन्। चेलीका कथाव्यथाअनुसार गीत लेख्छु,' प्रजापति भन्छन्, 'मैले हरेक गीतमा नारीको वास्ताविक वेदना गाएको छु।'
कथाकार कुमार नगरकोटी आफ्ना कथाका पात्रजस्तै अनौठा र रोचक लाग्छन्। प्रेम र यौनका सम्बन्धमा उनका कथामा नवीन तत्व, अभिव्यक्ति र धारणा पाइन्छन्। व्यक्तिगत हिसाबले पनि उनी प्रेमबारे अलिक पृथक्, अलिक...
भविष्य भएको होटल व्यवस्थापन
प्लस टूपछि कुन विषय पढ्ने ? अन्योलमा थिए, पाल्पाका इमानसिंह गुरुङ। १२ कक्षाको परीक्षा सकेपछि दुई महिना यही प्रश्नको समाधान खोज्दै भौँतारिए। यसै क्रममा मामाले उनलाई ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट...
ब्राजिलमा 'सुन्दरी भेला'
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, जेरार्ड पिकेलगायत चर्चित खेलाडीका श्रीमती वा प्रेमिका ब्राजिल पुगेका छन्। उनीहरू आफ्ना पति वा प्रेमीका साथै आफ्नो टिमको समर्थन गर्दै हौसला बढाउन ब्राजिल पुगेका हुन्। टिमको...